Fivarotana ny ampahany amin'ny sarotra hahazoana ny zom-pirenena Antigua sy Barbuda
Ny ekipan'i Rendezvous Bay dia miara-miasa aminao amin'ny fananganana ny tranonao nosy tsy manam-paharoa amin'ny iray amin'ireo valan-javaboary tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny lalàna momba ny famolavolana Rendezvous Bay dia natao hanamorana ny maritrano manambatra ny natiora sy ny tontolon'ny maritrano. Ny fomba fijery mahavariana sy ny rivotra tropikaly dia manasongadina ny habaka ivelan'ny trano, fa ny estetika manjaka kosa dia toerana malalaka sy organika ary tsy manam-potoana.
Miaraka amin'ny hakitroky ny trano ambany noho ny haitraitra manokana, ny trano rehetra ao amin'ny Rendezvous Bay dia ho fialokalofana manokana. Ny fitsipiky ny famolavolana mitaky toerana vaky sy fametrahana tranobe mamaly dia hampifaly ny mpianakavy sy ny namana, ary koa hanome fialan-tsasatra sy fialofana ao anatin'ny trano tsirairay.
Ny mpividy an-trano dia afaka mampiasa ny iray amin'ireo volavolan-dalàna namboarin'i Rendezvous Bay, mamorona kinova manokana, na mamolavola ny tranony manokana, miasa mivantana amin'ireo volavolan-tanin'i Rendezvous Bay manokana na miaraka amina mpanao mari-trano safidy. Ny tetikasa dia tsy maintsy manaraka ny torolàlana ankapobeny sy ny maritrano ny nosy araka ny tolo-kevitra ao amin'ny Fitsipika momba ny famolavolana endrika Rendezvous ary neken'ny ekipa Design Review. Afaka miara-miasa amin'ireo mpamorona endrika anatiny na iraisam-pirenena izay nofidinao ianao. Afaka manampy amin'ny fananganana ny ekipa mpamorona anao izahay ary hiara-miasa akaiky amin'izy ireo amin'ny fanananao.
Sata Fikambanan'ny fiarahamonina
Ny vondrom-piarahamonina Rendezvous Bay dia hofehezina amina lalàna mifehy antsoina hoe Community Association Bylaws sy amin'ny alàlan'ny Community Association Board of Directors, izay hisolo tena ireo mpiara-miasa ao amin'ny fiarahamonina. Ity antontan-taratasy amin'ny antsipiriany ity dia misy torolàlana momba ny famolavolana, ny firafitra ary ny fitantanana, ny lalàna mifehy ny famolavolana endrika, ny famerana sy ny fampiasa amin'ny lalana, ny vidiny ankapobeny ary ny fampahalalana momba ny Fikambanan'ny tompon-trano.
Ny fomba fijery mahavariana sy ny rivotra tropikaly dia manasongadina ny habaka ivelan'ny trano, fa ny estetika manjaka kosa dia toerana malalaka sy organika ary tsy manam-potoana.
Ny ekipan'ny fananganana an'i Rendezvous Bay dia tompon'andraikitra amin'ny fandefasana isan-trano. Miaraka amin'ny mpiasa manao teti-bola, ny ekipa dia hiasa mivantana amin'ny mpanjifa na ny matihanina voatendry amin'ny alàlan'ny dingan'ny famolavolana mba hamoronana ny drafitra fananganana trano farany.
Ny ekipan'i Rendezvous Bay dia hanara-maso ny fanamboarana rehetra miaraka amin'ireo mpandraharaha eo an-toerana amin'ny fifaninanana ary hanome antoka ny fananganana ho an'ny mpanjifa. Ny serivisy famolavolana ara-dalàna sy anatiny dia azo omen'ny mpiasan'ny Rendezvous Bay, na, toy ny famolavolana trano, ny ekipa dia afaka miara-miasa amin'ireo matihanina amin'ny antoko fahatelo voatondro ho an'ireo serivisy ireo hanomezana trano feno sy feno ho an'ny mpanjifa tsirairay.